माधवलाइ लाल गद्धार भनेका ओलीले फेरी किन पार्टीको अध्यक्ष बनाउन तयार भए ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही बेर समय दिएर बोलेका अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
तर, आफूले यति भन्दा पनि माधव नेपालले पार्टी एकताप्रति इच्छा नदेखाएको बताउँदै ओलीले बैठकमा भने, ‘मैले यति भन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाइएको छैन, अनेक बहाना खोजिएको छ ।
त्यसपछि पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहियो भनिरहेका छन् । किन ? हामीलाई पार्टीबाट निकाल्न ? ढुक्क हुनुस् कमरेडहरू, त्यसो हुन दिइने छैन । किनकि, यस्तो अभ्यास उनीहरूले पहिले पनि गरेका छन् ।’
मंगलबार भने प्रदेश अध्यक्षहरूले आआफ्नो प्रदेशको रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूले अहिलेको स्थितिमा पार्टी फुट्यो भने केपी ओलीको चुनाव क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव जित्न नसकिने नेताहरूले बताएपछि अध्यक्ष ओली गम्भीर बनेको र लचिलो हुन तयार देखिएको स्रोतको दाबी छ । ओलीले नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताए पनि यसबारे नेता नेपालको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।